Wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo ay saameyn ku yeelatay Roobkii da’ay – Geelle Mag
Wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo ay saameyn ku yeelatay Roobkii da’ay
Ali Ahmed Posted On November 27, 2019
Waxaa gebi ahaanba xirmay wadada xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho, Jowhar iyo tuulooyinka kale oo hoostaga, waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay Ganacsatada Magaalada Jowhar.
Roobkii ka da’ay Gobolka Shabellaha Dhexe iyo fatahaada Webiga Shabeelle ayaa waxa ay jareen wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa Magaalada Jowhar, iyada oo taasi ay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan.
Qaar ka mid ah Ganacsatada Magaalada Johwar ayaa waxa ay sheegeen in Ganacsigooda uu hoos u dhac ku yimid, taas oo ay sabab u tahay xirnaanshiyaha wadooyinka oo dadkii uga imaan lahaa tuulooyinka aysan soo geli karin Gudaha Magaalada.
Sidoo kale waxa ay sheegeen in maciishada Magaalada Jowhar ay sare u kacday, isla markaana maalmahaan wax badeeco ah aysan uga imaan Magaalada Muqdisho, maadaama Gaadiidkii u keeni lahaa ay wadooyinka ka xireen Roobkii da’ay iyo fatahaada Webiga Shabeelle.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Ganacsiga Maamulka Hir-Shabeelle Xildhibaan Maxamed Yuusuf Colow ayaa sheegay in ay la socdaan dhibaatooyinka Ganacsatada kasoo gaaray burburka wadooyinka iyo kuwa roobka iyo fatahaada ku xirmay.
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayuu ugu baaqay in ay dedejiso dhismaha wadada xiriirisa Magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar, si ay dhibaatooyinka uga baxaan Shacabka ku nool Magaalada Jowhar.
Soomaaliya oo afar sano kadib dib looga bilaabay dhoofinta Mooska